September | 2015 | HimiloNetwork
Zakariya September 30, 2015	Leave a comment 383 Views
New Delhi (Himilonews) – 50-jir Muslim ah ayaa lagu dhangadeeyey ku-tiri-ku-teen tibaaxaysay inuu cunay hilibka Lo’da oo laga manmuucay—sababo caqiido awgeed—gudaha dalka Hinduuga u badan ee Hindiya ilaa uu ka dhinto. “Mohamed Akhlaq waxaa lagala soo baxay gurigiisa oo ku yaalla duleedka New Delhi waxaana soo weeraray dad gaaraya boqollaal habeenkii Isniinta,” sarkaal bileyska ka tirsan ayaa u sheegay AFP. ...
Zakariya September 30, 2015	Leave a comment 969 Views
Muqdisho – Taalladu waa nooc kamid ah dhismayaasha dunida ee loo dhiso xusuus qofeed ama dhacdo muhiim ah oo mudan in lagu baraarugsanaado falka ay taariikh ahaan ugu fadhido bulshadaas oo ku saleysnaan karta mid dhaqameed, caqiidadeed, taariikheed iyo wixii lamid ah. Qof kasta wuu og yahay goobaha ugu caansan dunida ee raad-raaca ku foorara. Mid kasta oo goobahaas kamid ...
Zakariya September 30, 2015	Leave a comment 246 Views
Iyada oo dhacdo kasta ay la timaado marmarsiiyo, hadana waxaa wali jira dhacdooyin aan xalkooda laga sal-gaarin jeer iyo maanta tiiyoo aragtiyo badan lasoo bandhigo. Maqnaanshaha diyaaradeed ama in la waayo waa jaad kamid ah dhacdooyinka aan xalkooda laga sal-gaarin. Habada, http://himilonetwork.com://himilonetwork.com, waxay idin soo gudbinaysaa 10-kii diyaaradood oo mar kaliya hawada laga waayay; iyo wixii ay geysteen dhimasho iyo ...
Zakariya September 29, 2015	Leave a comment 282 Views
Muqdisho, Soomaaliya (Himilonews) – Madax-weynaha dalka Zimbabwe Robert Mugabe ayaa ceebeeyey isku dayga ay wadaan dalalka reer Galbeedka ah oo ay ku doonayaan in dunida laga sharciyeeyo xaq-u-raadinta ragga ragga fuula “U galmooda.” Isaga oo kahor hadlayay kal-fadhiga guud ee QM, Mugabe wuxuu sharcigan cusub ku tilmaamay mid kasoo horjeeda qiimaha, hab-dhaqanka suuban iyo caqiidooyinka Afrika. Wuxuu aad u weeraray ...
Zakariya September 29, 2015	Leave a comment 216 Views
Jubba – Nyamai, oo ah 38-jir hooyo shan caruur ah leh, waxaa lagala baxay xaafadeeda Koch County. Waxaa loo ilaashaday si joogto ah loo xiray si hakad la’aan ah. In-ka-badan 10 askari ayaa saf ugalay hal cisho oo xiriiri ah si ay u kufsadaan. “Fadlan, midkiin ha ii galmoodo. Dhamaantiin ha ii wada galmoonina,” ayay ku tawaawacday; waxaase loogu warceliyay ...
Zakariya September 29, 2015	Leave a comment 277 Views
Muqdisho – Midowga Yurub ayaa Isniintii shalay ahayd sheegay in howl-galka lagu samata-bixinayo soo-galootiga isku soo biimeynaya badda Mediterranean-ka lagu magacaabi doono Sophia “Safiya” si loo sharfo dhal-dhedig oo laga soo badbaadiyay Liibiya bishii hore. “Ergo kamid ah guddiga siyaasadda iyo amniga ee Midowga Yurub “MY” ayaa isku raacay in la anba-qaado wajiga xiga ee howl-galka 7da bisha Octoobar kadib ...
Zakariya September 29, 2015	Leave a comment 208 Views
Muqdisho – Iyada oo ay wali isasoo tarayso tirada dhimashada marba marka kasii danbeysa, warbixinnada warfidiyeenka ayaa tilmaamaya in ugu yaraan 1,100 qofood ay ku dhinteen burburkii Xajka oo ahaa kii ugu darnaa abid ee dhacdo-sanadeedka Xajka ka dhaca muddo rubuc qarni ku dhow. Tiradaan cusub waxaa ku dhawaaqay dalalka Bakistaan iyo Hindiya kuwaas oo sheegay in dowladda Sucuudiga ay ...
Zakariya September 29, 2015	Leave a comment 260 Views
Geneva (Himilonews) – Iyada oo mar kale fadqalalooyin ay kasoo cusboonaadeen Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe ee CAR, QM ayaa canbaareysay qalqalka ku dhacay caasimadda dagaalladu halakeeyeen ee Bangui—iyada oo ka digtay in qalalaasuhu uu caqabad ku noqon doono qorshaha geeddi-socod ee dib-u-dajinta barakacayaashii qaxay goor hore oo sanadkan bilowgiisa ah. “Xeer hoosaadka caalamiga ah ee xuquuqda Aadanaha, waxaan dhamaan ugu baaqayaa ...
Zakariya September 28, 2015	Leave a comment 250 Views
HOTAN (Himilonews) – Maamulka Shuyuuciyadda Shiinaha ayaa gebi ahaanba u diiday Muslimiinta ku nool gobolka dhaca waqooyi-galbeed ee dalkaasi la bixista magacyada Islaamiga ah. “Magaca gabadhayda waa Muslimah, marka waxaa guriga noogu yimid bileyska kuwaas oo nagu amray inaan magaca ka badalno gabadhayda sida ugu dhaqsiyaha badan,” haweeney Uighur ah oo Turakhan lagu magacaabo ayaa u sheegtay Radio Free Asia. ...
Hanbalyo Bahda Himilonews.com
Zakariya September 24, 2015	Leave a comment 431 Views
Dhanbaal qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska mareegta Himilonews.com ayaa u qoran sidatan; Dhamaan madaxda iyo shaqaalaha mareegta Himilonews.com waxay hambalyo ku aadan bilashada Ciidul-Adxa u dirayaan guud ahaan umadda Muslimiinta ah gaar ahaan shacbiga Soomaaliyeed. Agaasimaha mareegta Himilonews.com Al-ustaad Zakariya Hassan “Hiraal, tifaftiraha iyo madaxda kala duwan ee ilaha Aadnimada ee mareegta, waxay dhanbaal hanbalyo ah oo ku aadan ...